काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका पुत्र प्रकाश दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेको छ । प्रचण्ड पुत्र प्रकाशको २०७४ मङ्सिर ३ गते बिहान आकस्मित हृदयघातका कारण निधन भएको थियो । नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीले ३ मङ्सिरमा पशुपति आर्यघाटमा पुगेरै प्रकाशप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको थियो भने २०७४ मङ्सिर ४ गतेका दिन नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले एक शोक वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्ड पुत्र प्रकाशप्रति पार्टीकातर्फबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु भएको छ ।
महामन्त्री सिंहद्वारा जारी उक्त शोक वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष का. प्रचण्डका पुत्र का. प्रकाशको असामयिक र दुःखद मृत्युप्रति दुःख प्रकट गर्दै नेकपा (मसाल) ले उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछ । त्यसका साथै हामीले उहाँका परिवार जनप्रति समवेदना प्रकट गर्दछौँ ।
उहाँको मृत्युभन्दा पनि जुन प्रकारको अवस्थामा उहाँको निधन भयो, त्यो कैयौँ गुणा बढी हृदय विदारक छ । डाक्टरले दिएको जानकारी अनुसार उहाँलाई हृदयघात भई सकेपछि पनि कोठामा उहाँलाई मद्दत गर्ने कोही भएन र त्यसरी बिना कुनै सहायता वा उपचार उहाँको मृत्यु हुन पुग्यो । उहाँलाई अत्यन्तै छटपटी हुँदा पनि उहाँलाई मद्दत गर्ने कोही भएन ।
उहाँ चितवनबाट नै अस्वस्थ भएर काठमाडौँ आउनु भएको थियो । तर उहाँको अस्पताल वा डाक्टरकहाँ उपचार गराउने काम पनि हुन नसकेको कुरा थाहा भएको छ । यदि समयमा नै उहाँको उपचार हुन सकेको भए उहाँ जीवित रहने सम्भावना पनि थियो । राजधानीमा सबै साधन वा सहायताका अवसरहरू हुँदा हुँदै पनि जसरी बिना उपचार नै उहाँको मृत्यु भयो, त्यो धेरै पीडादायक छ ।
अन्तमा हामीले पुनः उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै उहाँको शोक–सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दछौँ ।”
प्रचण्ड पुत्र प्रकाशले युद्धकालदेखि नै बाबु प्रचण्डको साथै रहेर काम गरेका थिए । माओवादी पङ्क्तिभित्रैका अन्य नेताका सन्तानहरूले त्यसरी काम नगरेको गुनासोका बीच प्रकाशको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिइन्थो पनि । उनी यतिखेर बाबुको निर्वाचन क्ष्ँेत्र चितवन र श्रीमती बिना मगरको निर्वाचन क्षेत्र कञ्चनपुर–१ मा चुनाव प्रचार प्रसारमा सक्रिय रहेका थिए । तीन दिन अघिदेखि ज्वरो आएपछि उनी मङ्सिर २ गते चितवनदेखि काठमाडौँ आएका थिए । त्यही अस्वस्थताकै बीच उनी बाबुसित झापा गएका थिएनन् । मङ्सिर २ गते नै साँझ बाबुसितको कुराकानीमा आफूलाई सामान्य ज्वरो आएको र ३ गतेसम्म पनि ठिक नभएमा अस्पताल जाने बताएका थिए । साँझ आमा सीता दाहालले पकाएको जाउलो खाएर प्रकाश कोठामा सुत्न गएका थिए ।
सधैँजसो सामाजिक सञ्जालसित जोडिने प्रकाश त्यस दिन झापामा एक जनालाई म्यासेज गर्नुका अतिरिक्त अरू केही गरेका थिएनन् । एक्कासी बिहान आमा सीता दाहालले छोरालाई उठाउन जाँदा प्रकाश अचेत अवस्थामा थिए । तत्कालै बिहान ५ः ५० मा नर्भिक अस्पतालमा पुर्‍याए पनि तबसम्म अबेर भई सकेको थियो । डाक्टरहरूले प्रकाशलाई चेकजाँचपछि नौ मिनेटभित्रै मृत घोषित गरेका थिए । बिहानै सो घटनाबारे खबर गरिएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड हेलिकोप्टरबाट तत्कालै काठमाडौँ फर्केका थिए । त्यसपछि अस्पतालले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अस्पतालमा ल्याउनुभन्दा न्यूनतम तीन घण्टा अघि नै आकस्मिक हृदयघातका कारण प्रकाशको निधन भएको बताइएको थियो । साँझ ११ बजेतिर सुतेका प्रकाशलाई त्यसको लगत्तै राती १देखि २ बजेका बीचमा हृदयघात भएको अस्पतालले अनुमान गरेको थियो । कोठामा एक्लै भएका प्रकाशले हर्ट अट्याकपछि गुहार पाउन नसकेको अनुमान गरियो । अस्पतालले थप्यो– जब प्रकाशलाई बिहान अस्पताल पुर्‍याइयो, तबसम्म इसिजी परीक्षणमा उनको मुटुले कुनै तरङ्ग दिएको थिएन, हातखुट्टा चिसो र साह्रो भइसकेको थियो, आँखाको पुतली फैली सकेको थियो अर्थात् मृत्यु धेरै पहिले नै भई सकेको थियो ।
मृत्युको खबर पाउनासाथ उनका दुई श्रीमती सिर्जना पोखराबाट र बीना मगर कञ्चनपुरबाट बेग्ला–बेग्लै समयमा नर्भिक अस्पतालमा पुगेका थिए । अस्पतालमा पुग्नासाथ प्रकाशको शव देखिपछि श्रीमती सिर्जना बेहोस भएकी थिइन् । उनलाई नर्भिक अस्पतालमै भर्ना गरिएको थियो । आमा सीता दाहाल पटक पटक बेहोस भएकी थिइन् । दाहालका दुवै श्रीमतीतर्फबाट एक÷एक छोराहरू छन् । उनले पहिलो विवाह माओवादी नेता पोष्ट बहादुर बोगटीकी छोरी पत्रकार प्रभा बोगटीसित गरेका थिए । प्रभासित प्रकाशको सम्बन्ध विच्छेद भई सकेको थियो । प्रकाशको जन्म २०३६ असारमा चितवनमा भएको थियो ।
अस्पतालले मृत्युसम्बन्धी आधिकारिक घोषणा गरेपछि प्रकाशको शव पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको थियो । त्यहाँ माओवादी केन्द्रका साथै अन्य पार्टीका नेताहरू, उपप्रधानमन्त्री गोपाल मान श्रेष्ठ लगायत हजारौँले श्रद्धाञ्जली दिएका थिए । सोही बेला माओवादी केन्द्री पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालद्वारा हस्ताक्षरित शोक वक्तव्य पढेर सुनाइएको थियो भने अध्यक्ष प्रचण्डले प्रकाशको शवमाथि पार्टीको झण्डा ओढाएका थिए । त्यसपछि साँझ ४ बजेतिर हजारौँ नेता÷कार्यकर्ता, शुभचिन्तकहरू सामेल रहेको शवयात्रा पशुपति आर्यघाट पुगेको थियो । त्यहाँ प्रचण्डले उनलाई दागवत्ती दिएका थिए ।
प्रचण्ड पुत्र प्रकाशको निधनपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायत नेपालका नेता तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज सहित अन्य विदेशी कूटनीतिक व्यक्तिहरूले पनि कसैले प्रत्यक्ष भेटेर त, कसैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् समवेदना प्रकट गरेका थिए ।